Cây Hoa Thược Dược - Đặc điểm, Ý Nghĩa, Cách Trồng Và Chăm Sóc | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Cây Hoa Thược Dược – Đặc điểm, Ý Nghĩa, Cách Trồng Và Chăm Sóc | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Cây Hoa Thược Dược – Đặc điểm, Ý Nghĩa, Cách Trồng Và Chăm Sóc | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Izityalo zeDahlia Le ntyatyambo ithandwa ngabantu abaninzi ngenxa yombala wayo obalaseleyo, ivumba elimnandi kunye nobuhle kunye nobuhandiba bale ntyatyambo. Nangona kunjalo, ithetha ukuthini intyatyambo ye-dahlia, indlela yokukhulisa nokunyamekela? Nceda ubhekiselele ngezantsi.
1 Funda malunga neZityalo zonyango
2 Intsingiselo yeentyatyambo ze-dahlia
3 Intsingiselo ye-dahlias kwiholide yeTet
4 Ukutyala iintyatyambo zedahlia ukuze zidubule ngexesha leTet
5 Iindlela zokusasaza izityalo zedahlia
5.1 Ukusasazwa kwe-dahlias ngembewu
5.2 Ukusasazwa kwe-dahlias ngee-tubers
5.3 Ukusasazwa kwe-dahlias ngokusika
6 Iindlela zokukhulisa iidahlias ezintle
6.1 Ukukhulisa i-dahlias encinci kwiibhedi
7 Ukunyamekela i-dahlias
7.4 Ukuthintela izinambuzane
8 Iindlela zokugcina iintyatyambo zintsha ixesha elide emva kweTet
Funda malunga neZityalo zonyango
I-Dahlia inegama lesayensi elithi Dahlia pinnata, elinxulumene nechrysanthemum (Asteraceae), ngoko ke ikwabizwa ngokuba yi-dahlia chrysanthemum. Le ntyatyambo inzalelwane yaseMexico kwaye ikhuliswa kumazwe amaninzi kwihlabathi jikelele. EVietnam, i-peonies ithathwa ngokuba “ookumkani beentyatyambo”, ngelixa i-dahlias ithathwa “njengeentyatyambo eziqhelekileyo”.
I-Dahlias ziintyatyambo eziluhlaza, ezihlala ixesha elide, ezinobude obuyi-50-150cm, kodwa ngeedahlias ezincinci, zimalunga ne-20-40cm ubude. Iziqu zime nkqo, zinamasebe, amagqabi eentyatyambo alinganayo. I-Dahlias inemibala emininzi eyahlukeneyo: imfusa, ebomvu, emhlophe, … iipetali zixutywe ukwenza iindidi ezininzi, kukho iifom ezimbini, iintyatyambo ezingatshatanga kunye nezimbini.
I-Dahlia yintlobo ethanda kakhulu ukufuma, inamandla okukhula kunye nokuphuhlisa kakuhle kwiimeko zendalo zendalo.
Intsingiselo yeentyatyambo ze-dahlia
I-Dahlia yintyatyambo entsha ethandwa ngabantu abaninzi kungekuphela nje ngenxa yombala wayo obalaseleyo okanye ivumba lentyatyambo elivumba limnandi, kodwa nangenxa yeentsingiselo ezinzulu eziziswa yile ntyatyambo.
I-Dahlias ayizona kuphela izityalo zokuhlobisa ekhaya, kodwa zinentsingiselo enzulu ye-feng shui. Kwi-feng shui, ukukhula kwee-dahlias ezintle ekhaya kunceda ukuzisa inhlanhla kunye nempumelelo ebomini. Ukongeza, ukutshala i-dahlias phambi kwendlu ngoMhla woNyaka omtsha kufana nesikrini ukukhusela intsapho yakho kwinhlanhla.
Ukongeza, i-dahlias enemibala emininzi eyahlukeneyo: iintyatyambo ze-dahlia ezimnyama, iintyatyambo ze-dahlia ezibomvu, .. kufuneka zifaneleke kuzo zonke ii-pars ezi-5: isinyithi, iinkuni, amanzi, umlilo, umhlaba ukuze uqiniseke.
Intsingiselo ye-dahlias kwiholide yeTet
Usuku loNyaka oMtsha luhlala lunebinzana elithi “ininzi i-gladiolus, i-dahlia yesibini” ebonisa ukuthandwa kwale ntyatyambo kuNyaka omtsha kunye nentwasahlobo ezayo. Kwingqiqo yesiNtu, i-dahlia ihlonitshwa njengentyatyambo eqhelekileyo enophawu olunzulu.
NgoMhla woNyaka omtsha, i-dahlias ifanekisela inhlanhla, ukuchuma kunye nokuzala ebomini. Ukongeza, ngombala ngamnye weentyatyambo kukho umthunzi:
Idahlia ebomvu: kuzisa amandla afanelekileyo ebomini, ngaphezu koko, obomvu kwakhona ubonakalisa uthando oluvuthayo, oluvuthayo. Ngoko ke, iintyatyambo zeentyatyambo ze-dahlia zisetyenziselwa ukunika isithandwa sakho.
Idahlia emfusa: Kufuzisela ukunyaniseka nokuzinikela eluthandweni.
Idahlia emhlophe: Uphawu lobunyulu, ubunyulu kunye nobunewunewu.
Idahlia etyheli: izisa ithamsanqa, amandla okukhanya kobomi kunye novuyo.
Ukutyala iintyatyambo zedahlia ukuze zidubule ngexesha leTet
Abantu bakudala babenentetho ethi “umbulelo wokuqala, i-dahlia yesibini”, ngoko ke intyatyambo yedahlia kudala yaba yintyatyambo yesintu ngoSuku loNyaka oMtsha waseVietnam. Ngoko ke, ukuba akukho mbiza ye-dahlia endlwini, ayiyiTet. Izityalo zeDahlia zizityalo zokuhombisa ezinokuziqhelanisa neemeko ezahlukeneyo zemozulu, nazi iindlela zokukhulisa i-dahlias entle ekhaya onokuthi ubhekisele kuyo:
Iindlela zokusasaza izityalo zedahlia
Okwangoku, i-dahlias isasazwa ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo ngembewu, ukusika kunye nokutshintshwa kwezicubu. Indlela nganye ineengenelo zayo kunye nokungalunganga:
Ukusasazwa kwe-dahlias ngembewu
I-Dahlias idla ngokusasazwa ngembewu, kodwa le ndlela ihlala ithatha ixesha elide (ukusuka kwi-100 ukuya kwiintsuku ze-120). Ukusasaza imbewu ye-dahlia, unokubhekisa kula manyathelo alandelayo:
Khetha ukuthenga imbewu ngokulinganayo, ingahlaselwa zizinambuzane okanye izinambuzane.
Emva kokuthenga imbewu, zicwilise emanzini abandayo iiyure ezili-10, uze uqhubeke uhlwayela kwiibhedi. Qaphela ukuba emva kokuhlwayela imbewu, kufuneka ugalele umaleko we-humus ngaphezulu ukuze uncede ukugcina ukufuma ukuvuselela ukuntshula kunye nokuphepha ukuhlaselwa zezinye izinambuzane.
Emva kweentsuku ezili-10, imbewu iya kuhluma, inyanga e-1 emva kokuba izityalo ezincinci ziqala ukukhula, zinokukhutshwa kwaye zityalwe embizeni.
Ukusasazwa kwe-dahlias ngee-tubers
Ngale ndlela, unokusebenzisa zombini iimbiza zeentyatyambo emva kweTet, kwaye ugcine ixesha ekusasazeni. Ukwenza oku, yenza la manyathelo alandelayo:
Khetha iiglowubhu ezisempilweni ezingayi kubola okanye ukukrwela. Emva koko hlamba kwaye ugcine kwindawo ecocekileyo, epholileyo ukuze i-tubers iyancipha.
Yenza ama-cuttings ukuze kukhule amaqabunga, emva koko uhlukanise i-buds ukudala izithole ezininzi. Malunga nenyanga enye ungawahlula amathupha kube kanye (umyinge we-tuber uvelisa izityalo ezincinci ezingama-50).
Emva koko, amahlumela amancinci angatyalwa kwiimbiza kwaye anakekele.
Ukusasazwa kwe-dahlias ngokusika
Oku kuthathwa njengendlela elula, kulula ukuyenza ngaphandle kokufuna iindlela ezinzima. Ke ngoko, ukwenza oku, unokulandela la manyathelo:
Okokuqala, kufuneka ukhethe amasebe, ngoko khetha amasebe anempilo, angenazinambuzane kunye nexesha eliqhelekileyo lokuphila (akumele akhethe amancinci kakhulu okanye amadala kakhulu, kuya kuchaphazela ukukhula kwemithi emincinci kamva).
Ukulungiselela indlu yokusika: Ukuba kunokwenzeka, kungcono ukusebenzisa i-greenhouses esisigxina kunye neendawo zokugcina izityalo, izindlu zenetha ezinezixhobo zokulawula ukukhanya, umoya, ubushushu kunye nomswakama. Ukongeza, abantu bangaziyilela ezabo izindlu ezilula zokusika ngemathiriyeli yexabiso eliphantsi njengezintonga ze-bamboo ezigotywe kwi-arc enobude obusuka ku-n2.2 ukuya ku-2.5m, ubude ukusuka kwi-1.8 ukuya kwi-2m. kwaye unciphise ubushushu, unciphise imvula nomoya kwaye ugcine ukufuma ngaphakathi.
Khetha ama-cuttings angekudala kakhulu, angaphantsi kakhulu, abe namandla amahle kunye nobude be-6-8cm, abe namagqabi aluhlaza angama-3-4, akukho zinambuzane ezithatha ukusika. Amasebe amakhulu, amagqabi amaninzi, amaqabunga amancinci (3 x 3cm = 1,000 amasebe / m2); amagatsha amancinci, ama-cuttings amancinci amancinci (2.5 x 2.5cm = 1,500 amasebe / m2); Ukusikwa kwekwindla kuninzi kunehlobo.
Ukuphatha ukusikwa: Sika i-cuttings ekuseni, uphathe kwaye unqande ngokukhawuleza ukuze ugweme ukuphelelwa ngamanzi, izityalo ezixubileyo ziya kuchaphazela i-rooting. Sebenzisa izikhuthazo zokukhula ezifana ne-IAA, IBA okanye i-NAA ehlanjululwe ngokugxininiswa kwe-25 ukuya kwi-50ppm, cwilisa isiseko sesiqu kwisisombululo se-10-15 imizuzwana ukukhuthaza isityalo ukuba sithathe ingcambu ngokukhawuleza.
Ukusikwa: Xhuma isiseko samasebe 1.5 – 2cm ubunzulu phezu kwebhedi okanye kwiitreyi zeplastiki ezikhethekileyo ezinomhlaba ococekileyo. Ukusika kunokwenziwa ngeendlela ezimbini: ukusika okomileyo (ukubeka isiqu kwisanti ecocekileyo kunye nokunkcenkceshela) okanye ukusika okumanzi (ukunkcenkceshela ukuthambisa isanti kunye nokusika). Ixesha lokusika ingcambu malunga neentsuku ezili-10-15 ngokuxhomekeke kwimozulu (amaxesha ashushu nabandayo athatha iintsuku eziyi-15-20, iinyanga ezipholileyo zithatha iintsuku ezi-7-10 kuphela) ngoko kuyimfuneko ukusekela ixesha lokutyala. ukulungiselela ukusikwa okufanelekileyo.
Rhoqo ukunkcenkceshela ngokwaneleyo ngokwenza inkungu ukuze iingcambu zikhule ngokukhawuleza (kwiintsuku zokuqala zitshiza amaxesha angama-3-4 / ngosuku, ngeentsuku ezizayo ukutshiza ngokuthe ngcembe kunciphisa kodwa qinisekisa ukuba amagqabi ahlala eluhlaza). Sika amagqabi atyheli, amagqabi amadala, fafaza isichumiso esongezelelweyo samagqabi xa amasebe ebuyile kwaye eneengcambu ukuze akhule kakuhle. Emva kweentsuku ezili-12 ukuya kwezili-15 ukususela ekusikeni, isityalo ngasinye sinika iingcambu ezi-3-5 ubude obuyi-2 – 3cm, amagqabi azinzileyo anokuncothulwa atyalwe egadini.
Iindlela zokukhulisa iidahlias ezintle
I-Dahlias ziintyatyambo ezikhula unyaka wonke, kodwa ukuze zikhule kakuhle, kufuneka uzityale kwisityalo saseBusika-Spring. Ngenxa yokuba ngeli xesha, imozulu ayishushu kakhulu, ifanelekile ukuba izityalo zikhule. Ukongeza, kwizityalo ezintle ezidubulayo, kufuneka utyale kumgama we-15 x 15 (ubuninzi bezityalo ezingama-400,000 ngehektare).
Ukukhulisa i-dahlias encinci kwiibhedi
Emva kokuba izithole zandisiwe, kufuneka zityalwe kwindawo ekhulisa abantwana okanye embizeni.Kufuneka uqinisekise ukuba awungeni moya ukuqinisekisa ukukhula kwentshula kunye nokunciphisa ukukhanya kwelanga. Xa utyala, kufuneka ukhethe umhlaba okhululekileyo, onomsoco kunye nofunxa kakuhle.
Isityalo se-dahlia yintyatyambo ekulula ukuyikhulisa kunye nokukhathalela. Nangona kunjalo, ukuze isityalo sidubule ngesihlandlo seTet, kuya kufuneka unikele ingqalelo kwindlela yokutyala kunye nokunyamekela iintyatyambo ezintle zedahlia ezingezantsi:
I-Dahlias zizityalo zokuhombisa ezithanda ukufuma kakhulu, ngoko kufuneka uzinkcenkceshele rhoqo. Ngokomyinge, amaxesha angama-3-4 ngeveki, ikhula kakuhle kwaye ihlala isitsha ixesha elide. Nangona kunjalo, akufanelekanga ukuba unkcenkceshe kakhulu njengoko oko kuya kubangela ukuba iintyatyambo zibe namanzi okanye zibole iingcambu.
Emva kokuthena umthi ukulungiselela ukuqhakaza kweentyantyambo kwiholide yeTet, kuyacetyiswa ukuba ungeze izondlo ezongezelelweyo emthini ukuze udubule ngokukhawuleza.
I-Dahlia yintyatyambo ethanda imozulu epholileyo, iqondo lokushisa livela kwi-15-30 degrees Celsius, ngoko ke, kufuneka ubeke isityalo kwindawo enokukhanya okuphakathi, kungekhona kakhulu. Ngokukodwa xa iintyatyambo zincinci, izityalo akufanele zibekwe kwilanga elinamandla ngenxa yokuba ziya kutshisa kalula amaqabunga, zichaphazela iintyatyambo.
Xa utyala imithi enamagqabi angama-5-7, uya kuqhubeka nokuchumisa umthi, ungabhekisa kwisixa sesichumiso se-1000m2 ngezantsi:
Ukulungiselela: I-1.5 yeetoni zomgquba + 30kg yekeyiki yeoli, i-2kg yeDAP, i-10kg ye-NPK, kunye ne-20kg ye-microbial phosphorus.
Iintyatyambo zeDahlia ezinemibala emininzi: ebomvu, etyheli, emhlophe, epinki, …
+ Isichumisi: 100% yomgquba wasefama + 100% phosphorus + 100 iikeyiki zeoyile
+ Ukugqiba kwe-1: 2kg DAP + probiotics + 5kg NPK
+ Ixesha lesibini lokuchumisa: 5kg NPK + probiotics
Ukuba azikhathalelwanga ngokufanelekileyo, izityalo ze-dahlia zichaphazeleka kakhulu kwizinambuzane kunye nezifo: i-leaf rollers, izifo zefungal. Nazi izifo ezimbalwa eziqhelekileyo kunye neendlela zokuzithintela:
+ Isifo samachokoza amagqabi: Oyena nobangela kungenxa yexesha lemvula, elenza ukuba imozulu nomhlaba ufume, kuvele umngundo oyingozi. Ukuthintela, kufuneka usebenzise amanzi iZineb 0.1% kunye neBoocdo 0.5% etshizwe kwizityalo.
+ Ukubola kweengcambu: Kubangelwa kukunkcenkceshela okuninzi okubangela ukuba iingcambu zibole, kulo mzekelo, ungasebenzisa kuphela utywala obungama-60 ukuze uhlambe kwaye uphinde utyale.
+ Ukubola kwamagqabi: Okubangelwa kukutshintsha kwemozulu ngesiquphe, okubangela ukuba amagqabi atshise. Iyeza kukunqunyulwa kweendawo ezitshileyo kunye nezonakeleyo kwaye unakekele umthi, ukuthintela ukuvela komthi kubushushu obuthe ngqo.
Iindlela zokugcina iintyatyambo zintsha ixesha elide emva kweTet
Ithathwa njengentyatyambo eyimfuneko kwiholide yeTet yesiko, indlela yokugcina iintyatyambo zintsha ixesha elide ngumcimbi oxhalabisa kakhulu kubantu abaninzi. Ukugcina iintyatyambo zintsha, kufuneka ubeke ingqalelo kokubini ukusika kunye nokulungiswa kweentyatyambo:
Xa uthengela iintyatyambo, kufuneka udibanise emanzini kuqala, uze uhlambulule amaqabunga, unqumle amasebe, kufuneka unqumle i-diagonal flaps ukwenza iintyatyambo zikhule lula.
Iintyatyambo kufuneka zibekwe kwindawo enokukhanya okuphakathi, izinga lokushisa eliphakathi kwama-15-25 degrees ngokukhula kakuhle.
Xa ulungisa iintyatyambo kwi-vase, kufuneka udibanise i-vitamin B1 echotshoziweyo okanye i-aspirin yokubulala iintsholongwane kwiintyatyambo ukuze zincede zihlale zintsha ixesha elide.
Ukongeza, unokugcina iintyatyambo zintsha ixesha elide ngokufaka iviniga emhlophe kwi-vase imizuzu embalwa ngaphambi kokucwangcisa iintyatyambo okanye ukongeza iswekile encinci kwi-vase ukunceda ukukhuthaza i-photosynthesis yeentyatyambo.
Ngaphezulu ulwazi malunga neempawu, ukusetyenziswa, iintsingiselo ze-feng shui, indlela yokukhulisa nokunyamekela isityalo seDahlia. baokhuyennong.com iqokelelwe kwaye kwabelwana ngayo nawe. Ndikunqwenelela impumelelo ekukhuliseni i-dahlias
Đậu Cô ve (đậu que, đậu ve) | Cây cảnh – Hoa cảnh – Bonsai – Hòn non bộ – Sân vườn tiểu cảnh | Hatgiongtihon.net
Cây cẩm cù bộ phận nào dùng được và công dụng làm thuốc | Hatgiongtihon.net